केटा मान्छेलाई मन नपर्ने केटि मान्छेका ५ बानीहरु - यादका टुक्रा
2 years ago 19434 Views
कुरौटे बानि : केहि केटीहरु अरुको जिन्दगीको बारेमा कुरा गर्न माहिर हुन्छन्। उनीहरु सानातिना कुराहरुलाई पनि तन्काएर ठुलो बनाउन र अरुलाई सुनाउन सिपालु हुन्छन। यस्ता केटीहरु संग केटा मान्छेहरु सम्बन्ध गाँस्न मन पराउदैनन। आफ्नो साथि, परिवारका सदस्यहरुको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा चर्चापरिचर्चा गरि रहने बानि केटा मान्छेलाई मन पदैन। यस्ता केटीहरुले भविष्यमा पनि आफ्नो परिवार र जीवन साथीका कुराहरु अरु संग गर्न सक्छन अनि सम्बन्ध नै धरापमा पर्न सक्छ। कुरौटे बानीले आफ्नो सम्बन्ध मात्र हैन अरुको जिन्दगि अनि परिवार पनि बिगार्न सक्छ । यस्ता बानि भएका मान्छे संग जोकोही पनि टाढा रहन खोज्छ। अझ जीवन साथि छान्दै गरेको केटाले त यस्ती केटि मन पराउने कुरै भएन।
रुन्चे बानि : केहि केटिहरु यस्ता हुन्छन जो आफ्नै बारेमा मात्र सोचिरहन्छन्। उनीहरुलाइ आफ्नै समस्या मात्र ठुलो लाग्छ। त्यस्तै साना साना कुराहरुमा नै रुन थालि हाल्छन। यस्तो बानि भएका केटिहरुलाई केटा मान्छे आफ्नो जीवन साथि बनाउन चाहदैनन्। आफ्नो जीवन साथि भावनात्मक रुपमा सवल होस् भनेर कसले चाहदैन र ? यस्तो अवस्थामा जुनसुकै कुरामा पनि रुन थालि हाल्ने केटिलाइ जीवन साथि बनाएर आफ्नो लागि भार थप्न कुनै केटा मान्छे चाहदैनन्। जस्तो कि केहीबेर टाढा हुँदैमा रुन थाल्ने, कसैले सानो कुरा केहि बोलिदियो कि रुन थाल्ने, यस्ता बानीले सम्बन्ध कहिल्यै दह्रो हुन सक्दैन। यसले एकअर्काको लागि समस्या मात्र थप्ने काम गर्छ । त्यसैले यदि तपाईं पनि रुन्चे स्वाभावको हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सुधार गरिहाल्नुहोस। यस्तो स्वाभाव भएकी केटिलाइ केटाहरु मन पराउदैनन।
Don't Miss it मागी बिबाह गर्नु पहिले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
Up Next रिसाएको पार्टनरलाई कसरि फकाउने?
आफ्नो सोलमेट यसरी चिन्नुहोस् र पाउनुहोस् ट्रु लभ
जीवनमा सोलमेट (प्रेमी/प्रेमिका) तपाईंंको श्रीमान् अथवा ब्वाईफ्रेन्ड नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तपाईंंको सोलमेट जोपनि हुन सक्छ । तपाईंंको रोमान्टिक…
यसकारण पनि यी कुराहरु विवाहपछि पनि परिवर्तन हुँदैन
हुन त दशैंको मौसम छ । यही मेसोमा कतिपय नयाँ ससुराली जाँदैछन् । कतिले हालसालै विवाह गरेका छन् । विवाह…
विष्णु पुराण अनुसार मानिसको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्ने उपाय यस्तो छ । ॐ ।
हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित थुप्रै ग्रन्थ यस्ता छन् जुन बारे शायद धेरै मानिसहरु अनभिज्ञ छन्। धेरै जसो मानिसहरुलाई महाभारत, रामायण, गरुड…